သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ ၊ ရခိုင်ဂေဇက် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ အနေဖြင့် မိမိဒေသကို ကာကွယ်လိုလျှင် ဒေသန္တရရဲဖြစ်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကာ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်( ၁ ) နယ်ခြားစောင့်ရဲကွပ်ကဲမှုရုံးမှ ကွပ်ကဲရေးမှူး ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်က ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများနှင့် ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်တို့သည် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ၊ ၂၈ ၊ ၂၉ ရက်နေ့များတွင် မောင်တောမြို့ အပါအ၀င် တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ ၊ ငခူရ ၊ ကြိမ်းချောင်း ၊ ဖက်ဝပ်ချောင်း ၊ လောင်းဒုံ ၊ ခြံပြင် ၊ ဗောထီးကုန်း ၊ မောရ၀တီ စသည့် ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုကြသည်မှာ ကျေးရွာများတွင် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းပြီး လက်နက်တပ်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများရှိသော်လည်း ယင်းသို့ လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အတွက် လက်နက်ကိုင်ပြီး မိမိဒေသကို ကာကွယ်လိုလျှင် တရားဝင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှူးချုပ် သူရစခန်းလွင်ကပြောသည်။ ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်က “ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့က မလိုလား အပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမှာပဲ ဆိုတာကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားမယ်။ တရားဝင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်လို့ ရတဲ့နည်း ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းညွန်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်အတွင်းမှာပဲ သင်တန်းဖွင့်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ထားပါတယ် ” ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ မောင်တောခရိုင်အတွင်းမှ ဒေသခံရခိုင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအနေဖြင့် ဒေသန္တရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုလျှင် လာရောက်စာရင်းပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ သင်တန်းဆင်ပြီးလျှင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနည်းတူ လက်စာ ၊ ရိက္ခာများကိုထောက်ပံ့ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အသက်အားဖြင့် ၁၈ နှစ်မှနေ ၃၅ ထိ လက်ခံသွားဖြစ်ဖြစ်ကာ သင်တန်းကို ဝေးဝေးလံလံ မသွားရအောင် စစ်တွေ ( သို့မဟုတ် ) မောင်တောတွင် သင်တန်းပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ သင်တန်းဆင်း သည်နှင့် တပြိင်နှက် မိမိဒေသ ကျေးရွာများတွင် တာဝန်ကျပေးသွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်က ဆိုသည်။ ယင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် တာဝန်ကျနေသော မောင်တောဒေသခံ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လည်း မိမိဒေသသို့ ပြန်လာပြီး တာဝန်ထမ်းဆိုလိုပါက သက်ဆိုင်ဌာနလူကြီးများမှတဆင့် အဆင့်ဆင့် စာရင်ပေးဆန္ဒပြုခြင်းအားဖြင့် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းသို့ ပြောင်းရွေ့တာဝန်ချထားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှူးချုပ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နယ်မြေရှင်းလင်းရေးများကို လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် ဘင်္ဂလီကျေးရွာများကို ဖြတ်သွား ၊ ဖြတ်လာ မလုပ်ရဲသလို ရှာဖွေစားသောက်ရန် ရွာအပြင်မထွက်ခွာရဲသည့်အတွက် ၀မ်းရေးအခက်ကြုံနေရကြောင်း ၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူက လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကို တင်ပြတောင်းဆိုကြသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီချုပ် ဦးညီပုကလည်း မောင်တောဒေသခံများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု အလွန်အကျွံ မဖြစ်ကြရန်နှင့်မိမိဒေသအား စွန့်ခွာမသွားကြရန် မှာကြားခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တိုးမြှင့်ချထားကြောင်း ၊ မောင်တောဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ လုံခြုံရေး ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ ပြည်သူများကို ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← မောင်တောတွင် ရွာသို့ ပြန်လာစဉ် လမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ရခိုင်လူငယ် ၃ ဦးအား ကူညီရှာဖွယ်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိခင်ဖြစ်သူက တောင်းဆို